Galaxy S VI | Z&A Electronics | rgkzna.com
Network - HSPA+ (HSDPA 42.2 Mpbs / HSUPA 5.76 Mbps)
CPU - 1.2 GHz Quard Core Processor
Display - 114.8 mm (4.5'') HD Super AMO LED
Camera - 8.0 MP AF Camera + 5.0MP Front Camera
Display - 126.3 mm (5.0'') HD Super AMO LED
Camera - 13 MP AF Camera + 5.0MP Front Camera
G Core Prime
Display - 114.2 mm (4.5'') HD WVGA TFT
Camera -5MP AF/LED Flash + 2.0 MP Front Camera
CPU - 1.9 GHz + Quad 1.3 GHz Quard Core Processor
Display - 129.4mm (5.1'') Full HD Super AMOLED
Camera - 16 MP AF/LED Flash + 2.0 MP Front Camera
G Tab S 10.5
CPU - 1.9 Ghz Quadcore + 1.3 GHz Quard Core Processor
Display - 267.2 mm (10.5'') WQXGA (2560 . 1600) Super AMO Led Display
CPU - 1.8 GHz + Quad 1.3 GHz Quard Core Processor
Display - 119.0 mm (4.7'') HD (1280 . 720 Super AMOLED
Network - HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76 Mbps
CPU - Quad Core 1.2 Ghz Processor
Display - 133.3 mm (5.25'') HD TFT
Camera - 8 MP AFW/Flash + 1.9 MP (HD) Camera
Battery - 2,600 mAh Battery
Network - HSPA + ( HSDPA 42.2 Mpbs / HSUPA 5.76 Mbps )
CPU - 1.2 QuadCore Processor
Display - 6.0 Inch HD ( 720 . 1280) TFT
Camera - 8 MP AF/LED Flash +5MP Front Camera
CPU - (1.9Ghz Quadcore + 1.3 GHz Quard Core Processor)
Display - 144.3 mm (5.7'') Quad HD Super AMOLED
Camera - 13MP AF Camera + 2MP Front Camera
CPU - Octa Core (1.9Ghz Quadcore + 1.3 GHz Quard Core Processor)
Display - 143.9 mm (5.7'') Quad HD Super AMOLED
ပျော်ရွှင်မှုတိုင်းကို ပုံရိပ်ဖမ်းပေးမယ့် GALAXY s4
ထူးခြားစွာ ရှေ့နှင့်နောက်ဘက် ကင်မရာများကို တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြု၍ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံတည်းတွင် ရိုက်ကူးသူနှင့် ရိုက်ကူးခြင်းခံသူများ တစ်ချိန်တည်း ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အတူ 1.3 Mega Pixels ကင်မရာ၏ ပြတ်သားကောင်းမွန်မှုကြောင့် ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ရရှိမည့် ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်သည့်အပြင် အသံနှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း နည်းပညာကလည်း ဓါတ်ပုံများ ပြန်ကြည့်တိုင်း ကြည်နူးမှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်သည်။
မျှဝေခံစားမှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် GALAXY S4
Group Play နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ သီချင်းနှင့် ဂိမ်းများကို တစ်ချိန်တည်း၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်း သတ်မှတ်ထားသော လူဦးရေပမာဏအတွင်း နားဆင်ဆော့ကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ S Translator ကြောင့်လည်း ပြောပြချင်နေတဲ့ သင့်ရင်ထဲက ခံစားချက်များကို တစ်ခြားနိုင်ငံသားတစ်ဦးသိအောင် အလွယ်တကူ မျှဝေပြောဆိုနိုင်သည်။
အဆင့်မြင့် နေထိုင်မှုဘဝပုံစံအတွက် GALAXY S4
ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု S Health နည်းပညာအပါအဝင် နေထိုင်မှုဘဝပုံစံကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မည့် နည်းပညာများစွာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီး Smart Pause နည်းပညာကြောင့် မိမိဖုန်းအသုံးပြု၍ Vidoe File များ ကြည့်ရှုရာတွင် မျက်လုံးအကြည့် လွှဲဖယ်လိုက်ရုံနှင့် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်ပေးထားပြီး၊ Vidoe File အား အကြည့်ပြန်လည်ရောက်ရှိမှ ဆက်လက်ပြသပေးသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဝင်လာသည့်အခါ ဖုန်းအနီးလေထုထဲမှပင် လက်ဝှေ့ယမ်းရုံဖြင့် ဖုန်းပြောဆိုနိုင်ပြီး ဓါတ်ပုံများအားလည်း လက်ဝှေ့ယမ်းရုံဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၅ လက်မ Full HD Super Amoled မျက်နှာပြင်(၁၉၂၀ x ၁၀၈၀) ppi
3G: Exynos5 1.6 GHz Quad + 1.2 GHz Quad (AP)
XMM 6360 (CP)
2.5 G (GSM/ GPRS/ EDGE): 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
3G (HSPA + 42 Mbps): 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz
2GB RAM, 16GB သိမ်းဆည်းနိုင်မှု
microSD အား 64 GB ထိထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှု
13 Mega pixels AF ၊ Zero Shutter
Wi-Fi a/b/g/n/ac HT80
136.6 x 69.8 x 7.9 mm ၊ 130 g
- Group Play, Samsung Smart Scroll, Samsung Smart Pause, Air Gesture, Air View
- S Travel (Trip Advisor), S VoiceTM Device, S Health
- Samsung Hub, Samsung WatchON
- Samsung Adapt Display, Samsung Adapt Sound
- Safety Assistance, Samsung Wallet, Samsung KNOX (B2B only)
MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OCG, FLAC
- Codec: MPEG4, H.264, H.263, DivX, Div X3.11, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark
Galaxy Grand CDMA